fanontaniana Nanome antsika ny Concorde supersonic fitaterana
2 taona 5 volana lasa izay #273 by Colonelwing
Io fiaramanidina io dia afaka namakivaky ny Atlantika tamin'ny ora 3.5. Nahoana izy io no tsy nahomby?
Ny Concorde dia nanome antsika fitaterana supersonika. Fa nahoana no tsy nahomby io fiaramanidina io?
Tsotra ny valiny - Nodinihan'i Phil Edwards ny Vox.
2 taona 5 volana lasa izay #274 by Dariussssss
Ny tena marina dia ny taona fotsiny ny taonan'ny fiaramanidina. 30 + taona, miaraka amina gazy goavambe. Tena, marefo ary marefo. Tsy mandeha ho azy ny fiaramanidina androany, raha tena sarotra ny fiaramanidina amin'ny fiaramanidina amin'ny fiaramanidina. Tena mpankafy ny Concorde aho, saingy, inona no hitranga any Paris.
2 taona 5 volana lasa izay #286 by Gh0stRider203
Dariussssss nanoratra hoe: Ny tena antony dia ny taona fotsiny ny fiaramanidina. 30 + taona, miaraka amina gazy goavambe. Tena, marefo ary marefo. Tsy mandeha ho azy ny fiaramanidina androany, raha tena sarotra ny fiaramanidina amin'ny fiaramanidina amin'ny fiaramanidina. Tena mpankafy ny Concorde aho, saingy, inona no hitranga any Paris.
Mampihomehy aho fa manao dia an-dalamby manerana izao tontolo izao amin'izao fotoana izao ao amin'ny Concorde. Tsy azonao antoka hoe firy ny tongotra horaisinao na aiza no haka ahy, fa ho hitantsika
Halefako ao amin'ny lamosina vaovao indray ny safidiko
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: maryap
2 taona 5 volana lasa izay #299 by Colonelwing
Tiavo ny mpitsidika!
British Airways Concorde - Famaranana Cockpit Tour -
Concorde, mpamily tsara indrindra eran-tany. Miomàna ao G-BOAC, ny sainam-pirenen'ny fiarandalamby Concorde BA, ary mankafy ny fitsidihana amin'ny antsipiriany ny fiaramanidina tsara tarehy rehetra an'ny fiaramanidina. Dingana iray tamin'ny lasa tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Manchester.
2 taona 5 volana lasa izay - 2 taona 5 volana lasa izay #327 by Gh0stRider203
esory amiko raha toa aho ka manova ny bokiko .....
btw, nizara ny vid ao amin'ny facebook facebook aho, ary ny maha-tompoko ahy dia nomeko anao ny kolonely MISAOTRA ANAO! noho ny famoahana ny vid!
Fanovana farany: 2 taona 5 volana lasa izay Gh0stRider203.
2 taona 5 volana lasa izay #341 by Colonelwing